असोज ३०, २०७५ मगलवार १८:५४:५१
खानपान र अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण सुगर (मधुमेह) का रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ। हामीकहाँ मधुमेहलाई चिनी रोग भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर, हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने, मधुमेह भन्नेबित्तिकै चिनीरोग मात्र होइन। त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा धेरै छन्। मधुमेह भएका बिर...
शल्यक्रियाअघि बिरामीलाई बेहोस बनाइने एनेस्थेसिया के हो?
असोज २९, २०७५ सोमवार २०:३२:२९
– डाक्टरले अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेका छन्। मेरो बिरामीको त ठूलो अप्रेसन गर्नुपर्छ रे। यो अस्पतालमा त हुँदैन रे। – मेरो बुहारीको बच्चा निकाल्ने अप्रेसन गनुपर्ने भयो । अप्रेसन अहिले हुँदैन रे। आठ घण्टापछि खाली पेटमा गर्नुपर्छ रे।...
मुटुका रोगीले दसैंमा के खाने, के नखाने ?
असोज २९, २०७५ सोमवार २०:०३:४८
यसै पनि चाडपर्वमा अत्यधिक क्यालोरी, नुन, गुलियो खानेकुरा धेरै खाने गरिन्छ। दसैंको बेला नखाए कहिले खाने भनेर धेरै रातो मासु खाने चलन पनि छ। स्वस्थ व्यक्तिले पनि यस्ता खानेकुरा धेरै खाँदा समस्या निम्त्याउँछ भने बिरामीले दसैंजस्ता चाडबाडको समय खानेकुरामा अझ ध्यान दिनुप...
असोज २८, २०७५ आइतवार २०:४०:४५
ढाड दुखाइ भनेको के हो ? - घाँटी भन्दा तल्लो र पुठो भन्दा माथिको भागमा भएको दुखाइलाई ढाड दुखाइ भनिन्छ । - मान्छेको ठाडो शारीरिक बनावट भएकोले माथिल्लो शरीरको भार ढाडहुँदै दुवै खुट्टाबाट भूइँमा जाने हुनाले ढाड दुख्ने समस्या बढी देखिन्छ । - ढाड श...
उमेर नपुग्दै हड्डी कमजोर हुने समस्या ओस्टियोपोरोेसिस के हो?
असोज २७, २०७५ शनिवार १९:४३:३३
हड्डी शरीरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो। अर्थात् शरीरको पिलर हो, जसले शरीरलाई मजबुत बनाएको हुन्छ।हड्डीले शरीरभित्रको महत्वपूर्ण अङ्गलाई बाहिरी चोटबाट बचाउँछ। जन्मेको १८ देखि २० वर्षसम्ममा हाम्रो शरीरमा ९० प्रतिशत हड्डीको विकास भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि यसको विकास हुने क्रमस्थिर रहन्...
के हो गठिया बाथ? लक्षण, जोखिम र उपचार
असोज २५, २०७५ बिहिवार १९:४६:४७
बाथ एक प्रकारको दीर्घ रोग हो। यो अटोइम्युन डिजिज हो, अर्थात् शरीरमा आफ्नो रक्त कोषले आफ्नै अंगलाई खराब गर्ने रोग हो। सामान्य जनमानसमा बाथ भन्नेबित्तिकै युरिक एसिड नै हो भन्ने गलत बुझाइ छ। सबै बाथरोग युरिक एसिड होइन। युरिक एसिडको बाथ महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी देखि...
असोज २५, २०७५ बिहिवार १४:०५:१५
स्तन क्यान्सर महिलामा हुने डरलाग्दो रोग हो। नेपालमा यस रोगबाट वर्षेनि थुप्रै महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। हामीकहाँ क्यान्सर सम्बन्धी वास्ताविक तथ्यांक थाहा नभए तापनि केन्द्रीय स्तरका अस्पतालहरुको तथ्याङ्कअनुसार महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पछिको सबैभन्दा बढी हुने स्तन क्या...
असोज २२, २०७५ सोमवार २१:१३:४३
प्रविधिमा आएको विकास र स्वास्थ्यप्रति बढ्दै गएको चेतनाका कारण मानिसले आफ्नो शरीरमा लाग्ने कुनै पनि रोगको बारेमा जान्न र बुझ्न खोज्छ। रोग तथा समस्या पहिचानका लागि चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा भएका नयाँ–नयाँ विकासले सहज र छिटो नतिजा पाउन सकिने अवस्था आएको छ। ...
असोज २२, २०७५ सोमवार १४:०४:०१
स्तन पुरुष र महिला दुवैमा हुने अंग हो। तर, यसको विकास भने महिलामा मात्र भएको पाइन्छ । पुरुषको स्तनमा ग्रन्थीहरुको विकास भएको हँुदैन, त्यसैले यसको कुनै महत्व पनि हुँदैन। जबकि, प्रजननमा महिलाको स्तनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। स्तनको विकास प्रक्रियालाई म्यामोजेने...
केटाको आवाज केटीको जस्तो र केटीको आवाज केटाको जस्तो हुने समस्या के हो? कारण र उपचार
असोज २१, २०७५ आइतवार २०:२६:२१
नेपालमा केटा भएर केटी जस्तो र केटी भएर केटा जस्तो बोली हुने धेरै छन्। यस्तो समस्या भएका केटा केटी दुवैको उपचार सम्भव छ। चिकित्सकीय भाषामा केटाको आवाज केटीको जस्तो हुनुलाई पिबोरफोनिया र केटीको आवाज केटाको जस्तो हुनुलाई एन्ड्रोफोनिया भनिन्छ। मानिसहरुमा यस्तो समस्या...
किन आउँछ जिब्रोमा कालो दाग ? क्यान्सर पनि हुनसक्छ
असोज १९, २०७५ शुक्रवार २०:२१:२६
केही दिनअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एक व्यक्तिले जिब्रोमा कालो दाग आउनुको कारणबारे जिज्ञासा पठाएका थिए। जिब्रोमा आउन थालेको कालो दागले आफूलाई निकै चिन्तित बनाएको उनले उल्लेख गरेका थिए। उनीजस्तै धेरैले कालो दागका विषयमा प्रश्न गर्न थालेका छन्। हामीमध्ये पनि धेरैलाई ...
गर्भावस्थामा बच्चाको मुटुरोग बारे गरिने जाँच ‘फेटल इकोकार्डियोग्राफी’ के हो ?
असोज १३, २०७५ शनिवार १०:३०:५९
गर्भमा रहेको शिशु स्वस्थ छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने चलन पछिल्लो समय बढिरहेको छ। कतिपय रोगहरु शिशु गर्भमै भएको अवस्थामा पत्ता लगाउन सकिने प्रविधिको विकास भएपछि यो चलन पनि बढेको हो। जनचेतना बढ्दै गएपछि अभिभावक पनि आफ्ना बच्चा स्वस्थ जन्मिदै छन् कि छैनन् भनेर सच...
विश्वमै दुर्लभ : स्यालको टोकाइबाट हुने प्यारालाइटिक रेबिज नेपालमा
असोज १२, २०७५ शुक्रवार ०७:३८:५८
रेबिज रोग दुई प्रकार हुन्छन्। पहिलो, क्लासिकल अथवा फिउरिअस र दोस्रो, प्यारालाइसिस गराउने रेबिज अथवा प्यारालाइटिक रेबिज। यी रेबिजका प्रकारहरु लक्षणका आधारमा पहिचान वा छुट्याउने गर्ने गरिन्छ। प्यारालाइटिक रेबिज अति दुर्लभ रेबिज हो। तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो ...
असोज १, २०७५ सोमवार ०६:३०:००
जीवनशैलीको परिवर्तनसँगै मुटुरोग मानव मृत्युको पहिलो कारण बन्दै गएको छ। सहरीकरणसँगै बढेको अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण पुरुष र महिला दुवैमा हृदयाघातको दर बढ्दो क्रममा छ। विगतमा यो रोग विशेषगरी ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसमा देखिन्थ्यो भने अहिले ४० भन्दा कम उमेरका युवाह...
बच्चाको तौल र उचाइ बढेन भने के गर्ने?
भदौ ३१, २०७५ आइतवार ०६:००:००
आफ्ना बच्चाको उमेर अनुसारको तौल र उचाइ कम हुँदा हरेक आमाबाबु चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो। बच्चाको उमेर अनुसार तौल र उचाइ निकै कम हुनु वा उमेर अनुसार वृद्धि नहुनु राम्रो लक्षण होइन। तौल र उचाइ बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण प...
भदौ २३, २०७५ शनिवार ०६:००:००
गर्दनको दुखाइ भनेको के हो? टाउकोभन्दा तल र कुमभन्दा माथिको पछाडिपट्टिको भागमा भएको दुखाइलाई गर्दन (घाँटी)को दुखाइ भनिन्छ। गर्दन दुखेको कसरी थाहा पाउने? गर्दन चलाउन गाह्रो हुने, तल–माथि, दाहिने–देब्रे हेर्दा दुख्ने, हाततिर झमझमाउने, लाटो हुने, पोल्न...
पेटसम्बन्धी रोग निदानका लागि आधुनिक उपकरण
भदौ २०, २०७५ बुधवार ०८:१७:१०
पेट दुखाइको समस्या बोकेर धेरैजसो बिरामी अस्पताल आउने गर्छन् । औषधि खाँदा केही निको भए जस्तो लागे पनि फेरि बल्झिएपछि उनीहरू हामीसँग सल्लाह लिन्छन् । पेट दुख्नासाथ ग्यास्ट्रिक भयो होला भन्ने भ्रम धेरैमा । तर, सबै पेट दुखाइको कारण ग्यास्ट्राइटिस हुँदैन। पेट दुखाइल...
भदौ १५, २०७५ शुक्रवार ०६:००:००
डा. सुमन बाबु मरहठ्ठा, हाडजोर्नी विशेषज्ञ तथा जोर्नी प्रत्यारोपण विज्ञ हुन्। उनी विगत ६ वर्षदेखि जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञका रुपमा सानेपास्थित स्टार अस्पताल र निजामती कर्मचारी अस्पताल वानेश्वरमा कार्यरत छन् । उनी आफू आगामी दिनमा जोर्नी प्रत्यारोपणमै सक्रिय हुने बताउँछन्। जोर्न...
लाइम रोग नेपालमा पनि देखियो: कतै नसर्ने रोगहरूमा परिणत हुँदै त छैन?
भदौ १२, २०७५ मगलवार ०७:०२:००
नसर्ने रोगहरु जस्तै मुटु, कलेजो, थाइराइड ग्रन्थी, हाडजोर्नी, स्नायु प्रणाली आधीका रोगीहरु बढ्दै गएको तथ्यांकहरुले देखाउँछ। यसैको आधारमा नेपाल सरकारले भावी स्वास्थ्य योजनाहरुमा सर्ने भन्दा नसर्ने रोगहरुको रोकथाम वा उपचारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाइरहेको ...
भदौ ७, २०७५ बिहिवार ०६:००:००
स्नायु आपूर्ति हुन नसकेर मांसपेशीमा आएको कमजोरी, शरीरको कुनै अंग वा भाग नचल्ने अवस्थालाई प्यारालाइसिस भनिन्छ । प्यारालाइसिस धेरै कारणले हुन्छ । त्यसमध्य मस्तिष्कघात (ब्रेनअट्याक) को कारणले हुने प्यारालाइसिस नै जनमानसमा परिचित छ । हृदयाघात र क्यान्सरले हुने मृत्युको तेस्र...